लोकसेवा आयोगद्वारा स्थगित परीक्षा लिने तयारी – Lokpati.com
नेकपा सरकार मृत्यु राशिफल अपराध पक्राउ नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री चितवन अमेरिका प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
By लाेकपाटी न्यूज On २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०६:३६
काठमाडौंं, २० जेठ । स्थगित गरेको लोक सेवा आयोगले पुनः परीक्षा लिने प्रक्रिया थालेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थगित गरेको लोक सेवा आयोगले पूर्वनिर्धारित परीक्षा कार्यक्रमहरू पुनः परीक्षा लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सहसचिव वा सो सरहको अन्तरवार्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सहसचिवको अन्तरवार्ताबाहेकका परीक्षाहरु भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो। प्रशासन सेवाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ असार २ गतेदेखि १२ गतेसम्म अन्तरवार्ता हुने छ। यसैगरी नेपाल लेखापरीक्षणतर्फ आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको अन्तरवार्ता असार १४ गते निर्धारण गरिएको छ।
नेपाल प्रशासन सेवातर्फ खुला तथा समावेशीको द्वितीय चरणको मामिला प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम असार १५, १६ र १७ गते हुने छ। यस्तै अन्तरवार्ता कार्यक्रम भने असार १८ देखि २६ गते निर्धारण गरिएको लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। असार २८ गते भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ इञ्जिनियरिङ सेवा सिभिल, जनरलको अन्तरवार्ता कार्यक्रम राखिएको छ। यसअघि लोक सेवा आयोगले कुनै पनि चरणको परीक्षा भएकालाई रद्द नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
मंगलबारको राशिफल: कुन-कुन राशिका लागि शुभ छ ?
कोरोनाबाट भारतमा ५६ सयको मृत्यु, प्रभावित मुलुकको सूचिमा कति औँ स्थानमा ?
आजदेखि चार दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना, यी क्षेत्रमा…